Otu esi etinye Redis na Debian 11 Bullseye - LinuxCapable
October 14, 2021 September 18, 2021 by Jọshụa James
Nhọrọ - Hazie Iwu Redis UFW
Na njedebe nke ntuziaka, ị ga-ama otu esi etinye ma hazie Redis na Debian 11 Bullseye gị sistemụ nrụọrụ.
OS akwadoro: Nnenna 11 Bullseye ma ọ bụ karịa
Ọ bụrụ na ịtọbeghị akaụntụ onye ọrụ sudo ma ọ ga-amasị gị, gaa na nkuzi anyị Otu esi etinye onye ọrụ na Sudoers na Debian.
Site na ndabara, usoro Redis 5 na-abịa gụnyere na ebe nchekwa Debian 11. Iji wụnye ọrụ Redis, pịnye iwu a:
Ozugbo ejikọrọ, ọnụ ọnụ gị ga-egosipụta (127.0.0.1:6379). Ugbu a ping ọrụ Redis dị ka ndị a:
Ekele, ị tinyela Redis na sistemụ arụmọrụ Debian 11 Bullseye gị wee chọpụta na ọ na-arụ ọrụ. Na-esote, ị nwere ike hazie Redis.
Ọ bụrụ na etinyere UFW, ịkwesịrị ịmepụta UFW ikike iwu na ọdụ ụgbọ mmiri TCP 6379. Dabere na nrụnye gị na ihe achọrọ, ma ọ bụrụ na ị na-eji otu ma ọ bụ na netwọkụ ụyọkọ.
Nke mbụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịwụnye UFW, jiri iwu a:
Ozugbo arụnyere, gbanye firewall.
Nke a ga-amalite firewall ma mee ka usoro malitegharịa. Site na ndabara, iwu bụ ịgọnarị ndị niile na-abata ma hapụ ndị niile na-apụ apụ.
Na-esote, soro ọmụmaatụ n'okpuru wee họrọ ma ọ bụ gbanwee nhọrọ. A na-atụ aro nke a nke ukwuu iji mee ka Redis sie ike.
N'ime ntuziaka ahụ, ị ​​mụtala ka esi etinye Redis na Debian 11 Bullseye site na iji ebe nchekwa ndabere ya site na njikwa ngwugwu dabara adaba. Ị mụtala otu esi anwale ọrụ ahụ site na ịpị ya na ịgbanwe oke ebe nchekwa yana interface netwọk iji dabara na nhazi dị iche iche.
Categories Debian Tags Nnenna 11 Bullseye, Redis Mail igodo
Otu esi etinye VirtualBox na Ubuntu 20.04
Otu esi etinye Memcached na Debian 11 Bullseye